» Tags » Ebumnuche na-agbapụ
Ihe ebumnobi bụ ihe ebumpụta ụwa nke ihe ọkụ ọkụ na-agba oke. A na-eji ya na ngwa ọgụ laser dị elu. Mgbe lasers nwere njupụta ike dị iche iche, ụdị mbugharị dị iche iche, na ebili mmiri dị iche iche na -emekọrịta na ebumnuche dị iche iche, different killing and destruction effects will be produced. .Ọmụmaatụ: Evaporative magnetron sputtering mkpuchi bụ kpo oku evaporation mkpuchi…Ihe nkiri aluminom, wdg (dị ka aluminom, ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara, titanium, nickel lekwasịrị anya, wdg) iji nweta usoro ihe nkiri dị iche iche (dị ka super-hard, eyi na-eguzogide, ihe nkiri mgbochi ihe mgbochi, wdg).
1.The sputtering akụrụngwa bụ mgbagwoju anya na-achọ a elu-voltaji ngwaọrụ: Ụkpụrụ nke sputtering lekwasịrị magnetron sputtering